Zilungiselele: umculo uzakutshintsha unaphakade kwiApple Music | Ndisuka mac
Amarhe abonisa ukuba ngomhla we-18, ngomso, siza kuba neendaba kwi-Apple Music. Kuyabonakala ukuba siza kuba nomgangatho weaudio ye-Hi-Fi kwi-Apple Music. Kodwa ukuba siqhubela phambili, sinamahemuhemu anyukile ngenxa yesibhengezo esikhethekileyo esivela kwinkampani efunda ngolu hlobo: Zilungiselele: umculo uza kutshintsha ngonaphakade.
Zilungiselele: umculo uza kutshintsha ngonaphakade. Le yindlela iApple ebhengeze ngayo iindaba ezizayo ezinokumiliselwa kwicandelo le-Apple Music. Ayisiyiyo kuphela isibhengezo esenzeka phakathi kwamahemuhemu omgangatho wea-Hi-Fi, kodwa kukwakho nentetho yokumiliselwa kwee-AirPods ezintsha ngokuhambelana Iindaba kwiaudiyo.
Ngoku, izingqinisiso ze "I-Apple ayinasiphelo", "Ilahleko yasimahla", "i-Hi-Res engenaLahleki" kunye ne "Dolby Atmos" zifunyenwe ngaphakathi kwisicelo sewebhu Apple Music ngu-9to5mac. Ezi ngxelo zibonisa ukuba iApple icwangcise ukwazisa ukuba abasebenzisi bazokwazi ukusasaza iingoma ezikumgangatho ophezulu kwaye banokuzonwabela ngandlela thile yeSpatial Audio besebenzisa iDolby Atmos eneAirPods Pro kunye neAirPods Max.
Ikhowudi eyongezelelweyo ikwabonisa ukuba kuphela ziingoma ezithile ezinokubakho ngaphandle kwelahleko kunye nokusasazwa komsindo IDolby Atmos, okoko iApple ibhekisa kaninzi kwibheji ethi ilahlekile kunye / okanye ineAtmos. Yintoni enokuthi iboniswe ecaleni kweengoma ezihambelanayo ngaphakathi kweApple Music.
Isalathiso kumgangatho ophezulu kunye nokusasaza okungasekhoyo sele kufunyenwe kwi-beta yokuqala yohlaziyo lwe-iOS elandelayo, inguqulelo 14.6. Ulwazi ngamanqanaba angalahlekiyo okanye i-HiFi kwi-Apple Music Hi yaqala okokuqala ekuqaleni kuka-Meyi kwaye ngokwengxelo leyo, iApple Music enelo nqanaba lomgangatho womculo. iya kuba nexabiso elifanayo nanamhlanje. Oko kukuthi, i-14.99 euro ngenyanga kwisicwangciso sosapho, i-9.99 kumntu ngamnye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Zilungiselele: umculo uzakutshintsha ngonaphakade kwi-Apple Music
I-Instagram ivavanya inkxaso yesikhangeli